Ankaray Metro မြေပုံနှင့် Ankara မီးရထားစနစ် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီAnkaray Metro မြေပုံနှင့် Ankara မီးရထားစနစ်
08 / 11 / 2019 rayhaber 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Maps, မြို့ပြရထားစနစ်များ, Metro, တူရကီ, TELPHER 0
တူရကီက Metro လိုင်းစခန်းများ
Ankaray Metro ရထားစနစ် Map နှင့် Ankaray: အတ္တရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်ဖြစ်သောတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုတူရကီတူရကီ၏မြို့တော်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု။ လက်ရှိအင်ကာရာရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်တွင်ရထားလမ်းစနစ်များ၊ မြေအောက်ရထားလမ်းများ၊ ကြိုးတန်းများနှင့်ဆင်ခြေဖုံးစနစ်များပါဝင်သည်။
Ankaray နာမတော်ဖြင့် ဝတ်စုံချုပ်သူ - ASTI "Light ကရထားလမ်း" ၏လမ်းကြောင်းသြဂုတ်လ 30 1996 အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်
တူရကီက Metro နာမတော်အားဖြင့် လခြမ်း - ပါတိတ် ဒီဇင်ဘာလတွင် 28 1997 စစ်ဆင်ရေးအတွက်ခရီးစဉ်အတွက်နောက်ဆုံးမိုးသည်းထန်စွာရထားလမ်းစနစ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 12 2014 ပါတိတ် - OSB လိုင်း-Törekent တလအကြာ,
မတ်လ 13 2014 လခြမ်း - line ကိုကာကွယ်ပါ Service ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တူရကီမြေအောက်ရထားစနစ်ကအတူတကွလခြမ်းနီနှင့်အတူစုစုပေါင်း 45 ဘူတာရုံရှိပါတယ်အကြားလွှဲပြောင်းဘူတာရုံ Ankaray ။
Ankaray 8,527 ကီလိုမီတာ။ တူရကီက Metro M1 16,661 ကီလိုမီတာ။ + M2 ကီလိုမီတာ 16,590 ။3+ M15,360 ကီလိုမီတာ။ ဤတရားလေးပါးရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်အား 55,140 ကီလိုမီတာ၏စုစုပေါင်းအရှည်။ ရှည်လျား။
တူရကီ Kecioren မီထရိုလိုင်းအတွက်ဆောက်လုပ်ဆဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လခြမ်းနီ Esenboga လေဆိပ်မှာအကြားအသစ်တခုလိုင်းတည်ဆောက်မှုကိုလည်းစီစဉ်နေသည်။
တိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်တူရကီ၏ဆောက်လုပ်ရေးသြဂုတ်လ71992 Dikimevi ASTI အပေါ်ပြီးစီးခဲ့ဧပြီလ 30 1996 Ankaray တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးအလင်းရထားလမ်းစနစ်, ခရီးစဉ်အတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စတင်ဝယ်လိုအား
လွတ်လပ်ရေးနေ့ (လွှဲပြောင်း: sincan-kayaşလိုင်း)
လခြမ်းနီ (လွှဲပြောင်း: M1, M2)
တူရကီမတ်လ 29 1993 ပေါ်ပထမဦးဆုံးမက်ထရို၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Kizilay မက်ထရိုလိုင်းလမ်းကြောင်းမှာတည်ရှိပါတိတ်ဒီဇင်ဘာလ 28 1997 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးများနှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပါတိတ်က Metro စခန်းများ
လခြမ်းနီ (လွှဲပြောင်း: Ankaray)
Sıhhıye (လွှဲပြောင်း: sincan-kayaşလိုင်း)
Yenimahalle (လွှဲပြောင်း: Yenimahalle-Şentepe Cable ကိုကားလိုင်း)
မက်ထရိုလိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်လေ့လာဖို့လခြမ်းနီကာကွယ်ပါစက်တင်ဘာလ 27 2002 အပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ Tamamlayamayınတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, သမ္မတနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးကျော် ယူ. မတ်လ 13 2014 အပေါ်ကိုလက်စသတ်။
KIZILAY ÇAYYOLUမြေအောက်ရထားလိုင်းကို mxnumx
Söğütözü (လွှဲပြောင်း: Ankaray)
စိုက်ပျိုးရေး / ပြည်နယ်ကောင်စီဝန်ကြီးဌာန
ပါတိတ် - ကမက်ထရိုလိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဖို့ OSB-Törekentလမ်းကြောင်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ 19 2001 အပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ Tamamlayamayınတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, သမ္မတနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးကျော် ယူ. ဖေဖော်ဝါရီလ 12 2014 အပေါ်ကိုလက်စသတ်။
တူရကီမက်ထရို mxnumx ရပ်
ပြည်နယ် Mah ။
အဆိုပါလခြမ်းနီ၏သမိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးကာစီနိုဇူလိုင်လ 15 2003 အတွက်မက်ထရိုလိုင်းလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, ကိုကျော်ယူထားပါတယ်Tamamlayamayınတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမ္မတနိုင်ငံ၏ဆောက်လုပ်ရေး, ။
တူရကီ mxnumx KEÇİÖRENမြေအောက်ရထားမှတ်တိုင်
လခြမ်းနီ (လွှဲပြောင်း: Ankaray, M1, M2)
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော Metro LINE
5 တူရကီ Esenboga လေဆိပ်မှာလခြမ်းအကြားစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ Metro ဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီ၏ဆောက်လုပ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမ္မတနိုင်ငံ, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်။ မြေအောက်ရထားလိုင်းများ 25,366 ကီလိုမီတာ၏စုစုပေါင်းအရှည်။ ဘူတာ 1,708 ကီလိုမီတာအကြားပျမ်းမျှအကွာအဝေး။ စီစဉ်ထားကြသည် 15 ဘူတာကဖွဲ့စည်းသည်:
တူရကီသည့် MAP ရထားလမ်းစနစ်ထုတ်လုပ်သည် PROGRESS
တူရကီမီးရထားနှင့်မီထရို Interactive မှမြေပုံ
Yenimahalle Şentepe Cable ကိုကားလိုင်း
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံအကြားကေဘယ်လ်ကားစနစ် Yenimahalle-Şentepeရက်စွဲအပေါ်ဆုံးဖြတ်သင့်ပြီး 13.02.2012 172 15.08.2012 နည်းပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းနဲ့သွင်းယူသည့်စနစ်၏ရလဒ်အဖြစ်တင်ဒါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 26.03.2013 14.05.2013 နုအဖွင့်လိုင်းကိုပြုကန်ထရိုက်တာရဲ့အလုပ်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုး၏နေ့စွဲအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးစတင် 17.06.2014 အပေါ်သယ်ဆောင်ခရီးသည်ပို့ဆောင်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းရည်မြှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 2400 လူတွေကို / နာရီအတွက် Yenimahalle Şentepeကေဘယ်လ်ကား sistemitek ဦးတည်ချက်။ စတင်လိုင်းŞentepeစင်တာမှ Yenimahalle မက်ထရိုဘူတာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
Yenimahalle-Şentepe4တစ်ပြိုင်နက်အခန်း 106 3257 မီတာရွှေ့မည် cable ကိုကားတစ်စီးစနစ်၏အရှည်အကြားရပ်လိုက်နိုင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းကအကွာအဝေးနှင့်မီတာကျော်လွှားအကြောင်းမြင့်အတွက် 15 13.5 မီတာခြားနားချက်အတွက် 200 3257 မိနစ်, စက္ကန့်အတွင်းဘူတာရုံရိုက်ထည့်ပါ။
Şentepeမြေအောက်ရထားမထွက်ဗဟိုချိတ်ဆက်တံ့သောကေဘယ်လ်ကားစနစ်, ၏ Yenimahalle မက်ထရိုဘူတာŞentepeတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသယ်ပို့ပါသည်။
တူရကီ overhead ကေဘယ်လ်ကားမှုစနစ်အတွက်မြေအောက်ရထားနှင့်အတူညှိအဆိုပါယာဉ်အသွားအလာ overlay ကိုသက်သာရာကိုကူညီမယ့်လမ်းအဖြစ်အပြေးနေသည်။
, မသန်စွမ်းသက်ကြီး, ကလေးငယ်များနှင့်အလွယ်တကူမည်သူမဆိုအသုံးပြုကြသည်။
CAUTION! စနေနေ့၊ တူရကီနိုင်ငံ၊
တူရကီဘတ်စ်ကား, Metro နှင့် Ankaray ဆန္ဒခံယူပွဲနေ့အခမဲ့
တူရကီက Metro အတွက် Ankaray Crossing ဘူတာနှင့် ...
Ankara Metropolitan Metro နှင့် Ankaray da